बीपी प्रतिष्ठानको चरम बेथिति पार लगाउने कसरी? स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदशील क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोत साधनको समयमा मर्मत सम्भार नहुनु, पर्याप्त उपकरणको अभाव, ल्याब परीक्षण जस्ता समस... आइतबार, असार ६, २०७८
के हो मास्क माउथ? ६ लक्षण र रोकथामका उपाय निरन्तर मास्कको प्रयोगले श्वासप्रश्वासमा अप्ठेरो महसुस भएमा केही समयका लागि मुख खुला गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुले बी... आइतबार, असार ६, २०७८
मेलम्चीमा किन आयो यत्रो बाढी ? यो हो कारण र यस्ता छन् थप जोखिम अहिले एकैपटक धेरै क्षति हुनुको कारण भ्रेमथाङबाट आएका पहिरो मेलम्ची घ्याङबाट आएको पहिरोले थुनिएर एकैपटक आउनु हो। माथिबाट आएको यही पहि... शनिबार, असार ५, २०७८